Ụbọchị Ezinụlọ Ụwa
Ọ na-esiri ike ileghara mkpa ezinụlọ anya ná ndụ nke onye ọ bụla. Ọnụnọ nke ezinụlọ dị ike na nke dị n'otu bụ otu n'ime mkpa kachasị mkpa nke uche. E kwuwerị, nke a bụ nnukwu isi iyi nke ike. Ọ bụ ezinụlọ nke bụ ngwá ọrụ kachasị mkpa maka mmekọrịta mmadụ na ibe mmadụ, ma ebe a, e guzobere ya ọ bụghị nanị dị ka mmadụ, kamakwa dịka nwa amaala. Ya mere, na Septemba 20, 1993, UN General Assembly kpebiri ịmepụta Ụbọchị Ezumike Ụbọchị Ezinụlọ Ụwa. E kpebiri ime ememe ụbọchị ezumike kwa afọ, a kwadokwara ụbọchị ezumike ahụ na May 15.
Nzube nke mkpebi a bụ iji dọta uche nke ụwa ụwa mee ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nsogbu bilitere n'ezinụlọ. Ụwa dum taa na-eche nsogbu nke ezinụlọ nwere nanị nne ma ọ bụ nna na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ịgba alụkwaghịm. Ọzọkwa, di na nwunye na- enweta nkwado n'etiti ndị na-eto eto. Na ihe mere nke a bụ ọchịchọ nke ndị na-eto eto iji zere ibu ọrụ. Ihe a niile na-eduga n'eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-adịghị ike nke ndị bi na ya - ụmụaka, ndị agadi na ndị ime ime na-ata ahụhụ.
Kedu otu esi emefu ubochi ubochi?
Ememe a abughi "uhie" nke kalenda, ma nke a aputaghi na ekwesighi ime ememe. State na-eme mgbalị niile iji mee ka ihe omume a pụta ìhè. N'ụbọchị a, e nwere ihe omume ndị a na-eme iji dozie nsogbu ezinụlọ na ịhazi ntụrụndụ ndị ọzọ. Iduzi ihe ndi ozo na-enye ndi mmadu na-ekere òkè n'ememe ntụrụndụ dị iche iche gụnyere onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ. Maka ntorobịa, a kọwapụtara nkọwa nke usoro ihe omume dị ugbu a nke na-akpali ịmepụta ezinụlọ na ọmụmụ ụmụ. Ihe ndị dị otú ahụ na-ahụkarị ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-akụziri ndị nne na nna ka ha na ibe ha na-akpakọrịta ma na-akụziri ụmụ ha ihe. Enwekwara ọmụmụ ihe na asọmpi na-adọrọ mmasị nke na-enyere onye ọ bụla n'ime ezinụlọ aka inwe njikọ dịịrị ibe ya. Nleta nkwonkwo na ihe ndị dị otú a ga-enyere aka ịchọpụta ma dozie nsogbu ndị na-etolite n'otu ezinụlọ.
Tụkwasị na nke a, a ga-enwe Ụbọchị Ụbọchị Ezinụlọ Ụwa dị ka atụmatụ ya si dị. Isi ihe bụ na ndị ọzọ bụ ezinụlọ. Kwa ụbọchị mgbe ọrụ ụbọchị siri ike anyị na-agbalị izu ike, na-eme ihe kachasị amasị anyị, ma ezughị oge na ike maka nkwurịta okwu ezinụlọ zuru oke. Ya mere, na Ụbọchị Ezinụlọ, mkpebi ga-aga nke ọma bụ ịhapụ ihe efu efu kwa ụbọchị na mba. Ị nwere ike ighe shish kebabs ọnụ, na-ekerịta echiche na mmetụta gị. Na nkwụsị ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịmegharị oge ntụrụndụ site n'ịkụ egwu badminton, volleyball ma ọ bụ ihe egwuregwu kachasị amasị. Ma ọ bụ gaa na ntụrụndụ ntụrụndụ ebe ụmụaka ga-ezu ike ma na-atọ ụtọ na carousel, na ndị nne na nna ga-aṅụrị ọṅụ na-ele ha. Mkpebi dị oke mma maka imefu ezumike a ga-abụ njem nkwonkwo gaa na sinima maka fim ma ọ bụ egwuregwu. N'otu oge ahụ, onye ọ bụla nwere ike ịdọpụ onwe ya pụọ ​​na nsogbu ha ma kọọrọ ha ihe ha hụrụ na ndị ikwu ha. Ntughari nkwonkwo ma ọ bụ ihe ngosi ihe mere eme nke ebe a ga-adọrọ mmasị na ihe ọmụma oge niile maka ndị ezinụlọ niile. Mgbe ahụ ị nwere ike iri nri abalị na cafe kachasị amasị gị ma kwurịta atụmatụ maka ọdịnihu.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ihe niile n'otu ụbọchị, enwela nkụda mmụọ. Ị nwere ike ịkwaga ihe maka izu ụka na-esote. Ọ dịghịkwa mkpa ụbọchị ụbọchị ezinụlọ ahụ dị. A pụrụ ịhazi ezumike a n'onwe ya, n'ihi na iji nye oge ndị a hụrụ n'anya, ọ gaghị ezu otu ụbọchị n'ime otu afọ. Na ndụ nke onye ọ bụla, ọ dịghị ihe dị mkpa karịa ezinụlọ na ọ dị mkpa iji gbalịsie ike ịzọpụta ya. Na imekọ oge na nkwurịta okwu ga-enyere aka na nke a nakwa dị ka o kwere omume.
Ebee ka esi eji Afọ Ọhụrụ mee ihe?
Kedu ihe ị ga-enye maka ime ụlọ?
Ụbọchị ụmụ akwụkwọ - akụkọ ntolite
Party na ụdị egwuregwu
Onyinye maka ndị lụrụ ọhụrụ na agbamakwụkwọ
Enwere m ike ịnye obe?
Kedu otu esi eme ememe ncheta ụbọchị ọmụmụ na ọdịda?
Kedu onyinye ịhọrọ na March 8?
Champagne maka Afọ Ọhụrụ
Gịnị mere na ị gaghị eme ememe afọ 40?
Enwere m ike ịzụ nwa m ma ọ bụrụ na ahụ ọkụ m?
Achicha na strawberries na multivark
Ngwakọta Pirate maka ụmụaka
Olee otu esi eche echiche?
Nkwụ ahụ toro ghọọ mkpịsị aka
Ime ụlọ na-eji ụdị ihe eji eme ihe - ihe nzuzo nke ịmepụta ihe ndozi nke vintage
Ụlọ iri nri kacha mma iri na iri na Europe
Mmiri ihe ọṅụṅụ oyi maka oyi
Uwe na ọgụgụ
Gymnastics nke China maka ọnwụ na-efu
Ngwá ọkụ maka ndị na-asa efere
Ashton Kutcher natara onyinye a ma ama Robert D. Ray Pillar Character Award
Kedu otu esi mụta otu esi agba ọsọ 100 mita ngwa ngwa?
15 Ihe mere ị ga-eji nwee Minion
Kedu afọ ole nwamba ga - amalite "ije"?
Nri Tomato ude
Sina na September on the sea - where to go?
Ime ụlọ na Art Nouveau - echiche nke ime ụlọ a
Ụlọ Nzukọ Obodo nke Tallinn